Daawo: Xildhibaan Khadiija Diiriye Doorasho qof & cod ah ma dhici karto, waan ka fiirsan doonaa. - Awdinle Online
Daawo: Xildhibaan Khadiija Diiriye Doorasho qof & cod ah ma dhici karto, waan ka fiirsan doonaa.
December 11, 2019 (AO) – Wasiir Isboortiga iyo arrimaha Dhalinyaradda Xildhibaan Khadiijo Maxamed Diiriye oo ah Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Soomaaliya ayaa ka hadashay dooda sharciga doorashooyinka oo haatan horyaala golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
“sanad kaliyaa noo haray mudada xil heynteeda, waxey eheyd iney dowladdaan qabato Saddexdii sano ee la soo dhaafay guud ahaan inagoo isku duuban inaa soo qabano howlo cayiman, Maanta waxaa inoo began Suus, Suuskaas inoo beegan Saddex sano wax inoolaga rabay oo aan soo qabanay si wadajir ah ayaa jira” ayey tiri Xildhibaanada.
Previous articleAkhriso Magacyadda Dadka ku dhintay Hotel SYL & Kuwa ku Dhaawacmay
Next articleDaawo: Xildhibaan Cali Xoosh Qof walba waan inuu Qabiilkiisu aado si ay u soo Doortaan